China Roller ring ifektri abakhiqizi | I-Dongxing
Ingxenye phakathi noma ngaphandle kwe-groove emzimbeni we-roll wephrofayili roll. Ngokuya ngesikhundla esihlukile sendandatho yokugoqa esongweni, ingahlukaniswa ibe yindandatho yokuphela neyokuphakathi.
1.Melana nomthwalo oqinile wokugingqika
Indawo yokusika ububanzi ye-rack yangaphambili yokuqeda ukugoqa ifika ku-50mm2, futhi indawo yobubanzi bokusika kokugoqa kwangaphambi kokuqeda kufika ku-100mm2. Inani elikhulu kangaka lokuguquguquka kwe-rolling kudinga amandla okugoqa amakhulukhulu ama-newtons. Ngensimbi yasentwasahlobo, insimbi yebhola nenye insimbi ekhethekile, amandla ayo okugingqika makhulu.
2. Melana nomthelela wamandla wokushintshashintsha kwemvamisa ephezulu
Uhlaka lokugcina V = 100m / s, kuthatha imodeli yobubanzi obungaphandle 170 njengesibonelo, imvamisa yomthelela F = 11240 izikhathi / iminithi. Uma i-V = 80m / s, ububanzi bangaphandle bendandatho yokugoqa bungu-173 ngokwesibonelo, f = izikhathi ezingama-8836 / iminithi.
3, ngaphansi kwe-asidi ne-alkali corrosion corrosion
Njengoba amanzi apholayo agobekayo ane-asidi ethile ne-alkaline, ukusabela kwe-electrochemical kwendandatho yokugoqa, okungukuthi ukusabela kweseli kwe-galvanic, kwenzeka kule ndawo. Umphumela walimaza iringi yokugoqa. Ukushisa okuphezulu kuzoqhubeka nokukhuthaza lokhu kuphendula.
4. Melana nomvuthwandaba ofanayo wokushintshana komfutho wokushisa
Ngemuva kokuba iringi isigoqiwe futhi yalunywa ocingweni lwenduku eshisayo, ukushisa okudluliselwe kuyo kuyatholwa. Izinduku nezintambo ziyapholiswa. Umehluko wokushisa phakathi kobuso bendandatho nongqimba wayo wangaphakathi nakho konke okuzungezile kubangelwa i-gradient yokudlulisa ukushisa. Umehluko ekukhuleni okuqondile noma ukusikwa okubangelwa yilomehluko emazingeni okushisa kuholela ekucindezelekeni okushisayo. Ngoba noma yiliphi iphuzu ebusweni bendandatho yokugoqa iyashiswa futhi ipholile ngokushintshana kwemvamisa ephezulu, ingcindezi eshisayo ibuye ibe nomthelela eringini lokugoqeka ngokushintshana kwemvamisa ephezulu. Umphumela wokushintshanisa ukushisa okushisayo kuringi yiroli ukukhathala okushisayo, okuyindlela yokwakheka kofudu olujwayelekile.
5.Melana nokugqokwa kwejubane eliphezulu nokuhuzuka
I-groove egingqikayo nayo ibhekane nokushayisana ngejubane eliphezulu futhi igqoke ngenkathi iringi ye-roller igingqa futhi igingqa induku nejubane elikhulu. Ngaphezu kwalokho, izinhlayiya eziqinile nezikali ze-iron oxide emanzini okupholisa nazo zizodala ukuguguleka komhlaba kanye nemihuzuko.
1. Qinisekisa ukunemba kwemishini kweringi futhi uqinisekise ukuthi iyahlangabezana nezidingo zomdwebo.
2. Qinisekisa ikhwalithi yangaphakathi yeringi, 100% ngokuhlolwa okungonakalisi; Ukumakwa kweringi kuhambisana nemithetho yenkampani yakho futhi kugwema izinto ezithinta ibhalansi enamandla.
I-3, qinisekisa ukuzinza kwesikhathi eside kwekhwalithi yeringi yokugoqa, azikho izimbobo, izimbobo zesihlabathi, imifantu, ukufakwa kanye nokunye ukukhubazeka kwekhwalithi yangaphakathi, ekusetshenzisweni okujwayelekile kwendandatho ye-roll ayiveli inyama, ukuqhekeka kwento.
4. Qiniseka ukungaguquguquki komphumela weringi elinikeziwe kububanzi bokusebenza obusebenzayo. Isikhathi sokuqinisekiswa kwekhwalithi yendandatho yokuqhafaza yisikhathi esisebenza kahle sobubanzi beringi.
5. Ngesikhathi sokusetshenziswa kwe-inthanethi kwamaringi enkampani yethu, sizoqhuba ukulandelwa kwekhwalithi ukuqhubekisela phambili ikhwalithi yomkhiqizo. Uma kunezinkinga zekhwalithi zamasongo e-roller esizeni, sizokunikeza impendulo eqondile futhi enesibopho kungakapheli amahora angu-12.
Langaphambilini Ama-Roller e-High Speed ​​Speed ​​Tungsten Carbide - Indandatho yeroli ye-Carbide - I-Dongxing
Olandelayo: Carbide ngentambo roll indandatho
Usimende Carbide Roller Ring
Amaplanethi Intambo Roller Ring
I-Tungsten Carbide Roller Ring
Tungsten Carbide Roller, I-Tungsten Carbide Roll, I-Tungsten Carbide Roller Ring, Machining Ingxenye, Usimende we-Carbide Roll, Izindandatho zeMill Roll,